Resadresaka nifanaovana tamin'i Steven Woods: Fiteny Body Digital | Martech Zone
Alarobia, Oktobra 28, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Omaly tolakandro dia nahafaly ahy ny nanao ny voalohany Google Voice Podcast miaraka amin'i Steven Woods, CTO an'ny Eloqua ary mpanoratra Fiteny Body Digital. Google Voice dia mamela anao handraikitra ireo antso nataonao (tsindrio 4 mba hanombohana sy hampiatoana ny fandraisam-peo) ary apetraho ao anaty boaty Google Voice anao avy eo. Noheveriko ho fomba tsara hanombohana fanaovana audio amin'ny tranokala ity!
Miala aho. Nihaona tamin'i Steven aho ary nanararaotra niara-nipetraka tamina tontonana niaraka taminy tao amin'ny Vovonana fivarotana an-tserasera. Nahafinaritra ny niadian-kevitra momba ny bokiny, ny fivoaran'ny varotra ary ny mpivarotra aza miova avy amin'ny famoronana ka hatramin'ny karazana toetrany mpandalina. Mandritra ny tafa sy dinika…
Raha tsy mahita ny mpilalao ianao dia tsindrio ny lahatsoratra handrenesana ny tafatafa niarahana tamin'i Steven Woods.
Ny tanjona ao ambadiky ny Digital Body Language dia ny tsy maintsy manomboka mandinika ny Internet ireo mpivarotra vatana teny ny mpividy mba hiresaka amin'izy ireo amin'ny fomba mahomby. Ataontsika amin'ny resaka isan'andro amin'ny serasera mifanatrika izany. Mifantina amin'ny tenim-borona tsy fantatra izahay ary manamboatra ny fomba fitohizantsika miteny amin'ilay olona. Na izany aza, tsy tontosa tamin'ny Internet izany. Orinasa maro no tsy mijery ny fomba fandraisan'ny mpividy na amin'ny alàlan'ny tranokalan'izy ireo… manohy mandefa hafatra sy manaparitaka hafatra fotsiny izy ireo. Tena fampitahana tsara izany!
Nihevitra aho fa ity dia fotoana mety handraisana an-tsoratra fa tsy hanoratra fanamarihana amin'ny resakay. Betsaka loatra ireo fanasongadinana azo isaina, saingy i Steve dia manome teboka fanombohana mahafinaritra ho an'ireo mpivarotra tara amin'ny dinidinika.
Tags: fitenenana nomerikaeloquaala steven
28 Okt 2009 amin'ny 3:17 PM